iPad - Nhau dze iPhone | IPhone nhau
El iPad hwendefa kana piritsi Yakagadzirwa neApple, ndiyo yepakati mudziyo pakati peMac uye iPhone. Ane 9,7-inch yakawanda-inobata skrini uye kune mamodheru ane data rekubatanidza kana mamodheru chete neWiFi, akawedzera anotarisana nekushandisa mudzimba. Iyo inogovera inoshanda sisitimu neiyo iPhone, kunyangwe iwo mashandisirwo akagadziridzwa kune ayo makuru skrini. Iyo ine yayo yega yekushandisa chitoro uye inogona zvakare kushandisa ese maapplication pane iyo iPhone. Pano iwe unogona kuona zhinji dzayo nhau, asi kana iwe uchida kuziva dzese nhau pinda hanzvadzi yedu blog IPad nhau.
Miedzo inosimbisa kuti itsva iPad Air ine maitiro akafanana neiyo iPad Pro
Vamwe vasingafungirwe vakatenda kuti M1 processor inoisa iyo itsva iPad Air yaizo "capped" kupa yakaderera kuita ...
Chinhu chikuru chitsva chechiitiko cheApple nezuro masikati pasina mubvunzo yaive Mac Studio uye yayo…
Apple yakavandudza iyo iPad Air, uye yakazadzisa zvaitarisirwa. Iko kubatanidzwa kweiyo yakanyanya simba processor…
Isu tiri asingasviki maawa makumi maviri nemana kubva pachiitiko chekuvhurwa kweApple uye zvinoreva kuti runyerekupe…
Iyi ndeimwe yesarudzo dzatinofanira kuita dzimwe nguva uye dzakaoma kupindura ...
Folding skrini ine zvakawanda zvekushandisa kupfuura nharembozha, uye Apple inogona kunge iri kutoshanda pa…
kubudikidza Tony Cortes inoita 3 mwedzi .
Iyo iPad pasina mubvunzo ndeimwe yeApple's flagship zvishandiso. iyo iPhone ine vakawanda vakwikwidzi uye inofanirwa…